ကျွန်တော်တို့ကို လွှမ်းမိုးထားသော အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုများ
31 Mar 2017 . 6:24 PM
ဟိုတုန်းကတော့ နယ်ချဲ့တယ်၊ ကျွန်ပြုတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလာသိမ်းပြီး ရှိတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကို သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်က ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံအထဲထိဝင်လာတာမဟုတ်တော့ဘဲ အဝေးကနေပြီး လှမ်းသိမ်းပိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို သိမ်း ပိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို သိမ်းပိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝပုံစံကို အနောက်တိုင်းဆန်လာအောင် သွယ်ဝိုက်သိမ်းသွင်း ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မြန်မာလူငယ်တွေဟာ သိသိသာသာရော၊ မသိမသာနဲ့ရော အနောက်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အောက်ရောက် သွားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အနောက်တိုင်းက အရာအားလုံးကို အထင်ကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အနောက်တိုင်း ကို ယှဉ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာ၊ အတွေးအခေါ်အားလုံးချည့်နဲ့နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာဆီမှာက အနောက်တိုင်းမှာလို အခွင့်အလမ်းမပေါ်များပါဘူး။ အနောက်တိုင်းမှာက ကိုယ့်ဝါသနာပါတာကိုယ်လုပ်၊ ကျွမ်းကျင်ရင်ကျွမ်းကျင်သလို တင့်တောင့်တင့်တယ် နေနိုင်ပါတယ်။ လမ်းတွေအကုန်လမ်းရှိပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတော့ တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင်လမ်းဖောက်ရပါမယ်။
Playing music at yangon jetty.
မြေနီကုန်းကုန်းကျော်တံတားအောက်မှာ အကလေ့ကျင့်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေရှိပါတယ်။ သူတို့လေ့ကျင့်တာက မြန်မာအကမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့ ညီလေးတို့ မြန်မာအကမလေ့ကျင့်တာလဲလို့ သွားမေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ကိုဂေါက်သီးလို့ ထင်သွားမှာအသေအချာပါပဲ။ မြန်မာအက ကတာကို လူငယ်အသိုင်းအဝိုင်းက ဂုဏ်ယူစရာလို့ မမြင်တော့ပါဘူး။ စောင်းတီးတာသင်မလား၊ ဂီတာတီးသင်မလားလို့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခိုင်းကြည့်ပါ။ ပုဆိုးထက် ဘောင်းဘီကိုပိုနှစ်သက်တဲ့ လူငယ်တွေပိုများလာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကို ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားတတ်အောင် ငယ်ငယ်ကတည်းက လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း မခံခဲ့ရတာကတော့ အဓိကအကြောင်းအရင်း တစ်ခုပါ။
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အနောက်တိုင်းသား လူဖြူတစ်ယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေက အလိုလိုအထင်ကြီးတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘာလို့ပါလဲ။ အတွေးအခေါ်ကျွန်ပြုခံထားရလို့ပါ။ ငါတို့ဟာ အနောက်တိုင်းက လူတွေလောက်မတော်ဘူး။ မတတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကြီး ခေါင်းထဲရောက်နေသမျှ ကာလာပတ်လုံး ကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးနေရဦးမှာပါပဲ။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကလည်း အသေအချာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးစနစ်က တီထွင်ဖန်တီးမှုကို အားမပေးမပါဘူး။ အရင်ကအဟောင်းတွေကိုပဲ ထပ်တလဲလဲပြန်သင်နေရသလို သုတေသနလုပ်ရတဲ့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမှုမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းက အားပေးတာနည်းပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အကျိုးဆက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းသွားပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုခုအောင်မြင်ပြီလို့ကြားတာနဲ့ အဲ့ဒီအလုပ်ကို အုံလိုက်ကျင်း လိုက်ဝိုင်းလုပ်ကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ကို အနောက်တိုင်းကလူတွေက မင်းတို့ငါတို့လောက်မတတ်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ခေါင်းထဲရိုက်ထည့်ထားသလို ဒါကို ရှေးရိုးစွဲလူကြီးတွေက အထိုက်အလျောက်လက်ခံထား တယ်။ သူတို့ရဲ့တီထွင်ကြံဆမှုကို မကျော်နိုင်သရွေ့ သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေအောက်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ရှင်သန်ရမှာပါ။
မြန်မာသံသီချင်းကို နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ လူငယ်ကတော့ မရှိသလောက်ရှားသွားပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Wagakki Band နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပါမယ်။ Wagakki Bank က ဒီဖက်ခေတ်သီချင်းတွေကို ဂျပန်ရိုးရာတူရိယာတွေနဲ့ တီးမှုဖျော်ဖြေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ လူကြိုက်တော်တော်များပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ မြန်မာ့တူရိယာတွေနဲ့ ခေတ်သီချင်းတွေကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုအားနည်းနေသလို မြန်မာသံသီချင်းတွေကိုလည်း ပြန်လည်ဆန်းသစ်နိုင်မှု နည်းပါးသွားပါပြီ။ အဲ့ဒီရဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဂီတကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်မြတ်နိုးမှု မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ အနောက်တိုင်းဂီတ၊ ကိုရီးယားဂီတနဲ့ အခြားဂီတအမျိုးအစားတွေအကုန်လုံးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို သိမ်းပိုက်သွားပါပြီ။
အနောက်တိုင်းရဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို အထင်ကြီးနေတာထက်စာရင် သူတို့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံ၊ တွေးခေါ်ပုံကို အတုယူသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာ လူငယ်တိုင်းက အနောက်တိုင်းကိုကျော်လွှားနိုင်အောင် ကျားကုတ်ကျားခဲကြိုးစားရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ တရုတ်တို့၊ ဂျပန်တို့၊ ကိုရီးယားတို့ကို အတုယူပါ။ ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြိုးစားရင် ကျွန်တော်တို့ တကယ်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မှာပါ။